परदेशमा दसैं आएको गएको पत्तो हुँदैन
नेपाल लाइभ सोमबार, असोज २०, २०७६, १५:३०
चाडपर्वहरू कसैका व्यक्तिगत होइनन्। यी देश र समाजका साझा हुन्। साझा कुराहरू सामूहिक रूपमा प्रयोग गरिन्छन्। इद इस्लामको मात्र होइन। ल्होसार र बौद्धमार्गीको मात्र होइन। बुद्ध जन्मिएका पो नेपालमा हुन्। बुद्ध जयन्ती त विश्वका थुप्रै देशहरूमा मनाइन्छ। बुद्ध त विश्वका पो हुन्। अन्य थुप्रै जातजाति विशेषका पर्वहरू सबै समाजका साझा नै हुन। बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृति रुपमा सहिष्णुता रहँदै आएपछि यी सबै कुरा एक विशेष वर्ग र समूहको निजी रहने भएनन्। ती स्वत: समाजमा निहित हुने भइहाले। यसैलाई धार्मिक सहिष्णुता भनिएको हो।
विजयादशमी ढोकैमा अवस्थित छ। भर्खर नव दुलही भित्र्याउने चटारो जस्तै गाउँ टोलछिमेक दसैं भित्र्याउने तरखरमा लागिसकेको छ। दसैं नेपालीहरूको महान चाड हो। यसलाई विशेष हिन्दुहरूको भनिएता पनि स्वभावत यो पनि समाजकै साझा भइहाल्यो। चाडपर्व देशका मौलिक र सांस्कृतिक धरोहर हुन। यिनले झन्डै एक युगको सिंगो इतिहास बोकेका हुन्छन्। यी राष्ट्रिय गौरवका विषय पनि हुन्। तेरो र मेरोको संघारमा खिचातानी गरिरह्यौं भने हामीले बाँच्ने तरिका बिर्सन्छौं। हाम्रो धर्म, हाम्रो सस्कृति, हाम्रा परम्परा , हाम्रा रितिरिवाज भन्न सकेनौ भने यी हामी कसैका रहँदैनन्। हामी आफ्नै रहँदैनौं। आफ्नै नरहेपछि हामी अरूको कसरी बनौंला!
चाडपर्वले देशभित्रको कला-संस्कृतिको बनावट र सुन्दरताको झझल्को दिनुपर्छ। यी हाम्रा मौलिकताका चिनारी हुन्। त्यसैले त पश्चिमाहरू पनि आजभोलि दशमीको दिन जमरा र टीका ग्रहण गरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्। साडी चोलो, दौरासुरुवाल र ढाकामा सजिएका भेटिन्छन्।
वेद, पुराण र संस्कृतका श्लोकहरू भट्याइरहेका भेटिन्छन्। उनीहरूलाई कसैले आह्वान गरेको होइन वा भनौं उनीहरू आफैं तदारुकताका साथ चाखले सामेल भएका पो हुन त।
खासमा उनीहरूलाई हाम्रो कला, संस्कृति र संस्कारको बनोट मन परेको हुनुपर्छ। नत्र चाहे रामले रावणलाई मारेका होउन् वा दुर्गा भवानीले महिषासुरको बध गरेकी हुन् त्यो उनीहरूको चासो र गहन आस्थाको विषय पटक्कै होइन।
भनिन्छ- रङ, रूप र संगीतको कुनै भाषा हुँदैन।
त्यस्तै भएको हुनुपर्छ। घटस्थापनामा रोपिएका पहेंला जमरा, चामलमा मुछिएको रातो टीका, नयाँ, नयाँ पोषाकमा सजिएका मान्छे लगायत विभिन्न सर-सामग्री जुटाएर चाड मनाउने हाम्रो शैली र विधिले उनिहरूलाई आकर्षित गरेको हनुपर्छ। आस्था र विश्वासका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा भइहाले। कमसेकम देशवाशीहरूको हर्ष र खुसीको माहोलमा सबैजना सहभागी हुन त सक्ने भैहाल्यौ नि, होइन र?
नेपाल, भारत, भुटान र म्यानमार जस्ता देशहरूमा विशेष रूपले यो चाड मनाइन्छ। देश र भेष अनुसार मनाउने तौरतरिका फरक भएपनि समग्रमा यो एउटा विजयको उत्सव नै हो। दुर्गा भवानीले महिषासुरको बध गरिन् वा गरिनन्, रामले रावणको बध गरे वा गरेनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा नहोला तर असत्यमाथि सत्यको विजय हुनुपर्छ। लोभ, क्रोध, मोह, अंहकार जस्ता दुर्भावहरूको अन्त्य सदैव हुनुपर्दछ। यो समाज र राष्ट्रको साझा चाहना हो। विशेषगरी देशका सत्तासीन तथा सरकारी ओहोदामा विरानजमान हाम्रा राष्ट्र सेवकहरूमा दुर्गा भवानीको आशिर्वाद सदैव रहिरहोस्। बडादशैंले सम्पूर्णको हृदयबाट भ्रष्ट आचरणहरूको शुद्धीकरण गरोस्। देश विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढोस्।
गोदावरी, मखमली र सयपत्री जस्ता फूलहरूले देशभित्रका घर आँगनहरू हेर्न लायकका भए होलान्। यसैबेला त हो यी फूलहरू प्रेम, सद्भाव र अपनत्वको सुवास छर्ने काममा लिगीपरेका हुन्छन्। यतिबेल गाउँघरका बाटोघाटो गोरेटो आफैंलाई कुरिरहेजस्ता लाग्छन्। एउटा झोला काँधमा भिरेर अर्को हातले ठूलो ब्याग घिसार्दै थुप्रै प्रवासीहरू स्वदेश फिर्दै होलान्। कतिलाई छुट्टी मिलेन होला। कतिको छुट्टी र दसैंको तालमेल नमिलेको दशकौं भयो होला। तिनले घरमा भएका वृद्ध बा-आमा सम्झिँदा हुन्। विवाहितहरूको सम्झनामा श्रीमती र बालबच्चा पनि थपिने भए। बाँकी टीका सम्झिँदा हुन्। जमरा सम्झिँदा हुन्। गाउँठाउँका हरियाली फाटँहरू, गोरेटो गल्लीहरू सम्झिँदा हुन्।
आजको दुनियाँ बेफुर्सदी छ। कामको व्यस्तताले कसैलाई छाडेको छैन। दशैंको आगमन सँगै सहरबजारमा सन्नाटा छाउन थाल्छ। मान्छेहरू सोहोरिएर गाउँतिर लम्किन्छन्। गाउमाँ हुलमुल बढ्छ। यो दृश्य हेर्न लायक हुन्छ। दसैंमा हेर्न लायक नजारा मध्ये यो पनि एक हो। यतिबेलै त हो आफ्नाले आफ्नालाई भेट्छन्। ठूलाबडाको आशिष थाप्छन्। निधारमा टीका, कानमा जमरा अनि गाउँघरको रौनक। आहा! सम्झिँदा पनि मन तरङ्गित भएर आउँछ। प्रवासमा बसेर यी सबै कुराहरूलाई सम्झनामा उतार्नुको अर्को विकल्प छैन।
दसैंको पूर्वसन्ध्याबाटै आसपास बढेको रमझम र मान्छेहरूको रङ्गीचङ्गी जमात देखेर गाउँघरले पनि सोच्दो हो- यो दशैं सधैं आइरहोस्। बलिया पाखुराहरूले गाउँ नछाडुन्। यी यहीँ वरिपरी दौडधुप गरिरहुन्। हलो कोदालो लिएर यहीँको माटो खोस्रिउन्। यही माटोमा सन्तुष्टिका फसलहरू उब्जाउन्। भिरपाखाहरूलाई सिंगारून्। त्यसो गरे भने म पनि त यिनीहरूलाई सहरको भन्दा बढी आनन्द दिनसक्दो हुँ! सम्पूर्ण सुखसयल यिनीहरूले यहीँ भेट्ने थिए।
गाउँको यो भित्री व्यथा कसले सुनिदिने, कसले बुझिदिने? यहाँ मान्छेको प्राणको त बेवास्ता हुन थालिसक्यो। निस्प्राणलाई कसले सुन्छ?
मान्छे जतिसुकै सहरिया जीवनशैली बाँचेपनि गाउँघर छाड्न नहुने हो। यो कुराको सबैभन्दा बढी अनुभूति देश छाडेपछि नै हुने रहेछ। आफ्नै देश गुमाएर अर्कको देशमा शरणार्थी जीवन व्यतीत गर्न पुगेकाहरूलाई आफ्नो देशको सम्झना कति आउँदो हो! देश छाड्नु भनेको हृदयमा मातृप्रेमको अन्नत दीप प्रज्ज्वलन गरेर हिँड्नु पनि रहेछ। सम्झनाहरूले हृदयको दियोमा तेल थप्ने काम गरिरहेका हुन्छन्।
निरन्तर चारवर्षदेखि परदेशमा छु। देशको सम्झना त आइहाल्ने नै भयो। पहिलो चोटि देश छाडेर परदेशी भूमिमा टेक्दा जति अन्योलताले गाँजेको थियो त्यो भन्दा दश गुणा बढी राष्ट्रप्रेम पहिलो छुट्टीमा देशको विमानस्थल टेक्नेबेला हुँदोरहेछ। स्वर्गमा नै उत्रिँदैछु भन्ने लाग्दो रहेछ। विमानको झ्यालबाट तल आफ्नै देशको परिवेश देख्दा आफ्नै भुखन्डमा प्रवेश गरेँ भन्ने भावले शरीरमा उत्साहको सञ्चार हुँदोरहेछ। त्यसैले त भनिएको रहेछ, 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी!'
पहिलो दसैंमा देश खुब सम्झिएको थिएँ। अरूले जस्तै मैले पनि टीका जमरा सम्झिएको थिएँ। मन खल्बलिएको थियो। के बिराएँ, के छुटाएँ जस्तो लागिरहेको थियो। तर, अहिले कतिबेला चाडपर्व आउँछ, जान्छ पत्तो हुँदैन। अझै कतिवर्ष चाडपर्व मनाउन पाउँदिन भनी हिसाब गर्दा मनमा कुनै नैराश्यता पलाउँदैन। अनुहारमा उदासी वा हैरानी देखिँदैन। त्यसैले होला कहिलेकाहीँ एउटै कुराको एकदमै डर पो लागिरहन्छ, धन कमाउने र सपनाको महल उभ्याउने अभिलाषामा कतै मैले आफैंलाई उभिन सिकाएको आफ्नै कला-संस्कृति र धर्म- संस्कार बिर्सिने पो हुँ कि!
(न्यौपाने कामका लागि दक्षिण कोरियामा छन्।)
ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल हुँदै
समाजशास्त्रीय दृष्टिमा भानुभक्तका कृति संसारमा जन्मने र मर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। मृत्युपछि धेरैजसो बिर्सिइन्छन्। तर यहाँ यस्ता थोरै मानिस छन्, जो मरेर पनि अमर छन्... सोमबार, असार २९, २०७७